AKHRISO+DAAWO: Shirkii Galmudug ee Dhuusa-Mareeb oo laga soo saaray qodobo xasaasi ah.
DHUUSA(P-TIMES) – Shirka Dibu heshiisiinta ee kasocday magaalada Dhuusa-Mareeb ee xarunta Galmudug oo ay dawladda Soomaaliya iskugu keetay qeybaha bulshada ee gobaladaas ayaa laga soo saaray warsaxaafadeed ay ku jiraan qodobo badan oo xasaasiyad ay ka qabaan dhinacyada ka qeybgalay.
Shirka ayaa intii uu socday lagu soo bandhigay arrimo u badan kheyraadka Galmudug ku jira iyo sida loogu baahan yahay in ay bulshada Galmudug wadajir uga faa’iideysato, waxaana abaabulkiisa lahaa Wasaaradda Arrimaha gudaha ee Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya.
Qodobada kasoo baxay shirka ee sida weyn indhaha loogu hayo, waxaa kamid ah qodobka 7aad oo shirku codsaday in ay dawladda Soomaaliya soo rogto habraacyo iyo Sharuudo adag oo kuwajahan xulida xildhibaanada baarlamaanka, Doorashada Gudoonka, Madaxweynaha iyo Kuxigeenkiisa.
Qodobkan ayaa ah mid xasaasi ah oo ay dhinacyo badan goor horeba shaki weyn ka muujiyeen, waxayna sheegeen in ay tahay faragalin toos ah oo ay dawladda Soomaaliya ku sameynayso arrimaha Galmudug.
Loolan adag oo madax banaan ayay dhinacyada Mucaaradka DFS iyo Xukuumaddu ku heshiiyeen dhawaan, laakiin qodobada warsaxaafadeedka shirka waxaa kamuuqda in ay sidaas oo kale dawladdu dhisi doonto guddiga taabagalinta Galmudug ee dhismaha maamulkaas.